Aluminium chromium chiwanikwa CrAl
Semhando yekukwirira tembiricha uye ngura inoshingirira zvinhu, aruminiyamu chromium chiwanikwa upfu CrAl anoshandiswa zvakanyanya pamusoro pekupfeka, simbi yekupfeka uye mamwe minda yeakanyanya tembiricha chiwanikwa, ceramics, nezvimwewo Nekuchinja iyo micro morphology uye kuumbwa reshiyo yezvinhu, iyo inogona kushandiswa sekudzivirira zvinhu, kutora zvinhu, kufukidza zvinhu uye zvinoshandiswa zvakanyanya muaerospace, mauto uye mamwe emhando yepamusoro.
Aluminium chromium alloy CrAl zvakare yakakosha magetsi emagetsi. Nekuda kwehuwandu hwakawanda hweCr uye Al mune irimo, gobvu oxide firimu ichaumbwa pamusoro pechikwiriso patembiricha yakakwira, inozowedzera hupenyu hwebasa rezvinhu zvealloy. Iyo yakakwira Al zvemukati inogona zvakare kugadzirisa iyo resistivity, zvinobudirira kushandura magetsi simba kuita kupisa simba, uye chengetedza magetsi ekupisa zvinhu.
Aluminium chromium alloy CrAl ine yakanyanya tembiricha oxidation kuramba uye yakakwira resistivity, iyo inogona kushandiswa zvakanyanya mukukwirira tembiricha gasi kusefa, zvinopisa uye gasi zvisimbiso.
Pashure: Aluminium Cobalt chiwanikwa, Al-Co
Zvadaro: Tungsten Silicide, WSi2
Chromium Aluminium chiwanikwa
Chromium Aluminium Alloy Mafekitori
Chromium Aluminium Alloy Fekitori
Chromium Aluminium Alloy Mugadziri
Chromium Aluminium Alloy Vagadziri
Chromium Aluminium Alloy Mutengo
Chromium Aluminium Alloy Quotes